Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii cuslaa ee Muqdisho maanta ka dhacay(SAWIRO) – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii cuslaa ee Muqdisho maanta ka dhacay(SAWIRO)
Muqdisho- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo dhimasho & dhaawac dhaliyey oo saaka ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxanaa dagaalkaasi uu dhexmarey ciidamada dawlada KMG ah oo garabsanaya kuwa AMISOM & xoogaga Al-Shabaab.
Dagaalka oo ka dhacay degmooyinka Hodan & Hawlwadaag ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintey 6 qof 9 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray iyadoo dadka ku dhintey ama kuwa ku dhaawacmey dagaalka ee la dhigay isbitaalada ay u badan yihiin dad rayid ah oo ay waxyeeleysay rasaastii la isdhaafsaneyey iyo madaafiic habow ah oo ku habsatey goobo ay ku sugnaayeen iyo wadooyin ay marayeen.
Khasaaraha dagaalka ee soo gaaray dadka rayidka ah iyo kuwa dhawaacmayba waxaa sii wahliya dhimasho & dhaawac soo gaarey dhinacyadii dagaalamayey waxaana taasi barbar socota sheegashada dhinacyadaasi ee ku aadan guulo ay ka sheegayanaan inay dagaalkaasi ka gaareen.
Wariyaha SBC ee magaalada Muqdisho ayaa soo sheegaya in dagaalkan uu yimid ka dib markii ciidamada AMISOM & kuwa dawlada KMG ah saaka waaberigii ay dagaal ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen xoogaga xarakada Al-Shabaab.
C/laahi wuxuu sheegtey in ciidamada Dawlada ay dileen sida hadalka uu u dhigey dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab kuwa kalena ay maxaabiis ahaan u qabqabteen, walow aanay jirin cadeymo muujinaya arinkaasi oo saxaafada loo soo gudbiyey.
Laakiin afhayeenka xaradaka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa isna dagaalkaasi ku tilmaamay duulaan dhicisoobay oo ay ku soo qaadeen ciidamada AMISOM & kuwa dawlada KMG ah fariisimo ay ka sugnaayeen ciidamadoodu oo ku yaal agagaaraha isgoyska Dabka waxaana uu sheegay sida uu hadalka uu u dhigay inay iska difaaceen duulaankaasi.
Goobjooge codsadey inaan magaciisa saxaafada laga sheegin sababo dhanka amaanka ah ayaa sheegay in dagaalkii maanta uu yimid ka dib markii ciidamada Dawlada & Kuwa AMISOM ay weerer ku qaadeen Iskoolka Dhagaxtuur oo ay ku sugnayaeen xoogaga Al-Shabaab.